“Tyhila, wena, unikezela ukondla kwindalo iphela. ivela kuye yonke le nto: bonke bebuyela kuye; Obo buso beLanga lokwenene, ngoku obufihliwe ngesikhanyiso segolide, ukuze sibone INYANISO, kwaye senze umsebenzi wethu wonke, kuhambo lwethu sisihlalo sakho esingcwele. ”
Vol. 1 I-OCTOBER 21, 1904. 1
Le magazini yenzelwe ukuzisa kubo bonke abanokufunda amaphepha ayo, iTmessage yomphefumlo. Umyalezo umntu ungaphezulu kwesilwanyana kwimpahla yokuphamba-ungokobuthixo, nangona ubuThixo bakhe bufihlwe kuye, kwaye bufihlwe kwiikhoyili zenyama. Indoda ayenzeki ngengozi yokuzalwa okanye into yokudlala. Ungamandla, umenzi nomtshabalalisi wethemba. Ngamandla angaphakathi, uya koyisa indole, aphume ngaphandle kokungazi, kwaye angene kwindawo yobulumko. Apho uya kuziva uthando kubo bonke ubomi. Uya kuba ligunya elingapheliyo lokulunga.
Umyalezo onesibindi. Kwabanye kuya kubonakala ngathi akukho ndawo kweli lizwe lixakekileyo lotshintsho, ukudideka, ukuvela, ukungaqiniseki. Nangona kunjalo siyakholelwa ukuba iyinyani, kwaye ngamandla enyaniso iya kuphila.
"Yinto entsha le," utshilo intanda-bulumko yakudala, "Iintanda-bulumko zakudala zikuxelile malunga noku." Nokuba zithini na iintanda-bulumko zangaphambili, intanda-bulumko yelixesha idinise ingqondo ngokuqikelela okufundileyo, okuqhubeka kumgca wezinto ezibonakalayo. iya kukhokelela kwinkunkuma eyinyumba. “Ingcinga ezingento,” utshilo unjingalwazi womhla wethu wokuthanda izinto eziphathekayo, esilela ukubona oonobangela abavela kuyo. Inzululwazi indinika izibakala endinokuthi ndenze into ngazo abo baphila kweli lizwe. Isayensi yezinto ezibonakalayo inokwenza amadlelo amdaka, iinduli ezikumgangatho ophezulu, kwaye zakhe izixeko ezikhulu endaweni yemihlathi. Kodwa isayensi ayinakho ukususa unobangela wokungazinzi kunye nosizi, ukugula nezifo, okanye ukwanelisa iminqweno yomphefumlo. Ngokuchasene noko, isayensi yokuthanda izinto iya kutshabalalisa umphefumlo, kwaye ixazulule umhlaba kwindalo yonke. “Inkolo,” utsho umfundisi wezakwalizwi, ecinga ngenkolelo yakhe, "izisa emphefumlweni umyalezo woxolo nowovuyo." Unqulo, ukuza kuthi ga ngoku, luye lwangqinisisa ingqondo; Beka umntu, abe umntu emfazweni yobomi; wazalisa umhlaba ngegazi elaphalalayo kumadini enkolo kwaye aphalazwa kwiimfazwe. Ngokuthatha indlela yayo, i-theology inokwenza abalandeli bayo, abanquli bezithixo, bayibeke i-Esosiphelo ngendlela kwaye bayiphelise ngobuthathaka bomntu.
Kukwanjalo, intanda-bulumko, isayensi, kunye nenkolo ngabongikazi, abafundisi, abahlanguli bomphefumlo. Ifilosofi yenzeka kubo bonke abantu; luthando nokulangazelela kwengqondo ukuvula nokwamkela ubulumko. Ngesayensi ingqondo ifunda ukunxibelelanisa izinto kunye nokubanika iindawo zabo ezifanelekileyo kwindalo. Ngonqulo, ingqondo iyakhululeka kumxokelelwane wayo onwabisayo kwaye imanyaniswe noBuntu obungenasiphelo.
Kwixesha elizayo, intanda-bulumko iya kuba ngaphezulu kokuzivocavoca kwengqondo, isayensi iya kuphuma ekuthandeni izinto ezibonakalayo, kwaye inkolo iya kuba yeyonqulo. Kwixesha elizayo, umntu uya kwenza ngobulungisa kwaye amthande umzalwana wakhe njengoko ezithanda, kungengakuba efuna umvuzo, okanye esoyika umlilo wesihogo, okanye imithetho yomntu: kodwa ngenxa yokuba eyazi ukuba uyinxalenye yomntu, ukuba Kwaye idlelane lakhe ngamalungu apheleleyo, kwaye liphelele eliLo: ukuba akanokwenzakalisa omnye ngaphandle kokuzenzakalisa.
Kumzabalazo wobukho behlabathi, amadoda anyathela omnye komnye kwiinzame zawo zokufumana impumelelo. Sele beyifikele ngexabiso lokubandezeleka kunye nosizi, bahlala bengonelisekanga. Ukufuna okona kulungileyo, basukela ifom enesithunzi. Ekubambeni kwabo, iyanyamalala.
Ukuzingca kunye nokungazi kwenza ubomi bube ngumbala obonakalayo kwaye umhlaba ube sisihogo somlilo. Isimbonono seentlungu zixubekile ngenxa yokuhleka kwezitabane. Iimpawu zovuyo zilandelwa ziindawo zokubandezeleka. Umntu uyagoba kwaye ancamathele kufutshane nonobangela weentlungu zakhe, nokuba ubanjiwe zizo. Isifo, umthunywa wokufa, sibetha emigudwini yakhe. Emva koko kuvakala umyalezo womphefumlo. Lo myalezo ungamandla, othando, woxolo. Nguwo lo myalezo esiza nawo: amandla okukhulula ingqondo kokungazi, ucalucalulo nenkohliso; inkalipho yokufuna inyaniso ngandlela zonke; uthando lokuthwalisana ubunzima; uxolo oluza kwingqondo ekhululiweyo, intliziyo evulekileyo, kunye nokwazi ukuba ubomi bungapheli.
Bonke abo bafumanayo mabagqithise ngalo myalezo. Wonke umntu onalo "uLizwi" ukuba anike into eyakuthi incede abanye, uyacelwa ukuba afake isandla kumaphepha ayo.